Ch 1 मार्क – 2माछा
घर / बाइबल / मार्क को सुसमाचार / Ch 1 मार्क
1:1 येशू ख्रीष्टको सुसमाचारका को शुरुवात, परमेश्वरको पुत्र.
1:2 रूपमा अगमवक्ता यशैया द्वारा लिखित गरिएको छ: "हेर, म आफ्नो अनुहार अघि मेरो स्वर्गदूत पठाउन, जसले तपाईंलाई अघि आफ्नो बाटो तयार गर्नेछ.
1:3 मरुभूमिमा बाहिर रो एक को आवाज: प्रभुको बाटो तयार; सीधा आफ्नो बाटो बनाउन। "
1:4 जन मरुभूमिमा थियो, बप्तिस्मा र पश्चात्ताप एक बप्तिस्मा प्रचार, पापको एक छूट रूपमा.
1:5 र त्यहाँ बाहिर उहाँलाई यहूदियामा सबै क्षेत्र गए र यरूशलेमका सबै ती, र तिनीहरूले उहाँलाई द्वारा नदी जोर्डन मा बप्तिस्मा, आफ्नो पाप confessing.
1:6 र यूहन्ना उँट गरेको कपाल र आफ्नो कमर वरिपरि छालाको बेल्ट संग ढाकिएको थियो. र उहाँले सलह र जंगली मह खाए.
1:7 र उहाँले प्रचार, यसो: "मलाई बलियो एक मलाई पछि आउँछ. म योग्य तल पुग्न र आफ्नो जूता को laces loosen छु.
1:8 म पानी तपाईंलाई बप्तिस्मा छ. यद्यपि साँच्चै, उहाँले पवित्र आत्माले तपाईं बप्तिस्मा हुनेछ। "
1:9 र यो पनि त्यस्तै भयो, ती दिनहरुमा, येशूले गालीलको नासरतबाट आइपुगे. र उहाँले यर्दन यूहन्नाबाट बप्तिस्मा.
1:10 अनि तुरुन्तै, पानी देखि उक्लनुभन्दा मा, उहाँले देखे स्वर्गको खोल्न र आत्मा, एक ढुकुरले जस्तै, घट्दो, र उसलाई बाँकी.
1:11 र त्यहाँ स्वर्गबाट ​​एउटा आवाज थियो: "मेरो प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ; तपाईंलाई म राम्रो खुसी छु। "
1:12 र तुरुन्तै आत्मा उसलाई मरुभूमि मा संकेत.
1:13 र उहाँले चालीस दिन र चालीस रात लागि मरुभूमि थियो. र उहाँले सैतानको प्रलोभनमा थियो. र त्यो जंगली जनावर थियो, र स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई ministered.
1:14 त्यसपछि, यूहन्ना माथि हस्तान्तरण पछि, येशू गालील गए, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार,
1:15 र यसो भन्दै: "समय को लागि पूरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ. पश्चात्ताप र सुसमाचारको मा विश्वास गर्छन्। "
1:16 र गालील समुद्रको किनारमा द्वारा पारित, उहाँले सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास देखे, समुद्रमा जाल कास्टिङ, तिनीहरूले माझिहरु थिए.
1:17 अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "मेरो पछि लाग, र म तिमीलाई मानिसहरूका जलाहारी बनाउन हुनेछ। "
1:18 र एकैचोटि आफ्नो जालहरू छोडेर, तिनीहरू उहाँको पछि लागे.
1:19 र त्यहाँ बाट एक सानो तरिका मा जारी, Zebedee को त्यो देखे याकूब र तिनका भाइ यूहन्ना, र तिनीहरूले एउटा डुङ्गा आफ्नो जाल Mending थिए.
1:20 र तुरुन्तै उहाँले तिनीहरूलाई भनिन्छ. आफ्नो भाडामा हातले डुङ्गा आफ्नो बुबा Zebedee पछि र छोडेर, तिनीहरू उहाँको पछि लागे.
1:21 र तिनीहरूले कफर्नहुम मा प्रवेश. र Sabbaths मा सभाघरमा मा द्रुत प्रवेश, उहाँले सिकाउनुभएको.
1:22 र तिनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त भन्दा छक्क थिए. उहाँले रूपमा तिनीहरूलाई सिकाउँदा लागि जो अधिकार छ, र शास्त्री मन.
1:23 र तिनीहरूको सभाघरमा, त्यहाँ एक अशुद्ध आत्मा संग एक मानिस थिए; र उहाँले कराए,
1:24 यसो: "तपाईं हामी के हुन्, येशूले नासरतका? तपाईं हामीलाई नाश गर्न आएको छ? मलाई थाहा तपाईं जो: परमेश्वरको पवित्र। "
1:25 र येशूले यस्तो सल्लाह दिए, यसो, "मौन हुनुहोस्, र मानिस देखि विदा। "
1:26 र अशुद्ध आत्मा, उहाँलाई convulsing र एक जोर आवाज बाहिर रो, उहाँबाट प्रस्थान.
1:27 र तिनीहरू सबै तिनीहरू बीचमा प्रश्न भनेर छक्क परे, यसो: "यो के हो? र यो नयाँ सिद्धान्त के हो? अख्तियार लागि उहाँले पनि अशुद्ध आत्माहरू आज्ञा, र तिनीहरूले उहाँलाई पालन गर्छन्। "
1:28 र आफ्नो ख्याति चाँडै बाहिर गए, गालील सम्पूर्ण क्षेत्र नै.
1:29 र चाँडै सभाघरमा देखि प्रस्थान पछि, तिनीहरूले सिमोन र एन्ड्रयू घरमा गए, याकूब र यूहन्नाले संग.
1:30 तर सासू सिमोन एक ज्वरो बिरामी राख्नु. र एकचोटि तिनीहरूले उहाँलाई उनको बारे मा भने.
1:31 र उनको नजिक चित्रकला, उहाँले उनको खडा, हात द्वारा उनको लिइरहेको. र तुरुन्तै ज्वरो उनको बायाँ, र त्यो तिनीहरूलाई ministered.
1:32 त्यसपछि, साँझ आएपछि, पछि सूर्य सेट थियो, तिनीहरूले उहाँलाई सबै जो रोगव्याधि थियो ल्याए र ती जो दुष्ट थियो.
1:33 र सम्पूर्ण शहर ढोकामा भेला भएको थियो.
1:34 र उहाँले विभिन्न रोगहरूबाट संग परेशान थिए धेरै निको. र उहाँले धेरै दुष्ट फ्याँकिएको, तर उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न अनुमति छैन, किनभने तिनीहरूले उहाँलाई थाह थियो.
1:35 र धेरै प्रारम्भिक अप बढ्दो, प्रस्थान, उहाँले एक वीरान ठाउँमा गए, र त्यहाँ उहाँले प्रार्थना.
1:36 र सिमोन, र ती उसलाई जो थिए, उसलाई पछि पछि लागे.
1:37 र जब तिनीहरूले उहाँलाई भेट्टाएको, तिनीहरूले उहाँलाई भने, "सबैको लागि तपाईं खोजिरहेको छ।"
1:38 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "हामीलाई छिमेकी सहर र शहर जान दिनुहोस्, त्यसैले म पनि त्यहाँ प्रचार गर्न सक्छ भन्ने. वास्तवमा, यसलाई म आएको यस कारण लागि थियो। "
1:39 र उहाँले आफ्नो सभाघरहरूमा र गालील सबै भर प्रचार थियो, र दुष्ट बाहिर कास्टिङ.
1:40 र एक जना कोरी उहाँको आए, उहाँलाई फैलन. र तल kneeling, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं मलाई शुद्ध गर्न सक्षम छन्। "
1:41 त्यसपछि येशूले, उहाँलाई दया लिएर, आफ्नो हात राखे. र उसलाई छोएर, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: "म इच्छुक छु. शुद्ध हुने। "
1:42 र उहाँले बोली थियो पछि, तुरुन्तै कुष्ठरोग उहाँबाट प्रस्थान, र उहाँले शुद्ध थियो.
1:43 र उहाँले तिनलाई यस्तो सल्लाह दिए, र उहाँले द्रुत टाढा उहाँलाई पठाइयो.
1:44 अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो: "तपाईं कुनै एक बताउने यसलाई हेर्नुहोस्. तर जाने र उच्च पुजारी आफूलाई देखाउन, र मोशालाई यस्तो निर्देशन कि जो आफ्नो सफाई को लागि प्रस्ताव, तिनीहरूलाई लागि गवाही रूपमा। "
1:45 तर प्रस्थान होने, उहाँले प्रचार गर्न र शब्द disseminate गर्न थाले, उहाँले अब खुल्लमखुल्ला शहर प्रवेश गर्न सक्षम थियो भनेर, तर बाहिर रहने थियो, वीरान ठाउँमा. र तिनीहरूले हरेक दिशा बाट उहाँलाई भेला थिए.